Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) oo Kismaayo ka furay xafiis goboleedka Guddiga ee Jubaland. – GMDQ
Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) oo Kismaayo ka furay xafiis goboleedka Guddiga ee Jubaland.
Wafdi ka socda GMDQ oo ay horkaceyso Guddoomiye Xaliimo Ismaaciil ayna wehliyaan xubnaha Guddiga oo kala ah, Khadiijo Cosoble Cali, Maxamed Axmed Nuur. Xuseen Cabdi Aadan, Maxamed Daahir ayaa magaalada Kismaayo u tegay Inay ka furaan xafiiska Guddiga ee Jubaland iyo sidoo kale shaqaaleysiinta hawlwadeenadii ka shaqeyn lahaa xafiiskaas.
Dhowrkii cisho ee wafdiga Guddigu ku sugnaayeen Kismaayo, waxaa aad ula shaqeeyay maamulka Jubaland taas oo fududeysay in ay Guddiga u suurta galaan iney u hirgalaan dhammaan hawlihii ay u tageen halkaas. Guddoomiyaha Guddiga ayaana soo dhaweynta iyo wada shaqeynta maamulka Jubaland ka mahadnaqday. Sidoo kale waxaa wafdiga Guddigu aad u bogaadiyeen maamulka Jubaland oo Guddiga ugu deeqay goob ay ku shaqeeyaan.
Guddoomiye Xaliimo Yareey ayaa sheegtey in ay xafiiska GMDQ ay u qaateen shaqaalo tayo leh oo ay ka soo dhex xuleen codsadayaal badan oo daneynaayey inay ku guuleestaan tartanka, balse ay ku guuleeysteen imtixaanaadka 4 shaqaalo oo soo Marey nidaamka shaqaaleysiinta Guddiga.
Guddigu wuxuu wadaa dadaalo uu hawlihiisa ugu ballaarinaayo dalka iyo nidaamkii iyo qorshayaashii lagu cayimi lahaa goobaha loo isticmaali karo diiwaan gelinta cod bixiyaha.
Ka sokow xarunta dhexe ee Guddiga ee Muqdiaho, waxaa sidoo kale xafiis goboleedyo hore looga furay dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Jubaland ayaana noqotay dowlad goboleedka ugu danbeeyay ee laga hir geliyo xafiis goboleedka Guddiga.
Tallaabada xigta ayaa noqon doonta ballaarinta tirada iyo sare u qaadidda tayada shaqaalaha Guddiga ee gobollada si ay awood ugu yeeshaan iney hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah.
Waxaa la faafiyey April 10, 2019 April 10, 2019